Manomboka Amin’ny Mampahery Ka Hatramin’ny Mahatsikaiky, Zavatra 6 Izay Zarain’ny Olona Amin’ny Mediam-bahoaka Momba An’i Iràna Sy Ny Zavakanto Ary Ny Kolontsaina Persiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Avrily 2016 10:19 GMT
Manomboka amin'ny fiantrana ao an-dakilasy ka hatramin'ny Nowruz (Taom-Baovao Iraniana) ao amin'ny White House, ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny sasany amin'ireo zavatra izay zaraina amin'ny tranonkalam-pifandraisana amin'izao fotoana izao momba an'i Iràna sy ny zavakanto sy kolontsaina Persiàna
1. Rehefa manomboka ao an-dakilasy ny fiantràna
Ity lahatsary ity dia mampiteny ny olona hoe Aww joonam (Aw, cutie). Milaza ny tantaran'ny mpampianatra iray izay nampanantena kiraro entina mihazakazaka ho an'ny mpianatra mahazo naoty ambony indrindra. “Fa nahazo naoty ambony daholo ianareo rehetra,” hoy izy tamin'ny mpianatra. Nanoso-kevitra izy ny hisafidianan'izy ireo ny anaran'ny mpandresy amin'ny alalan'ny kisendrasendra. Nilazàna ny mpianatra mba hanoratra ny anarany amin'ny sombin-taratasy.
Noraisiny tao anaty lovia tsatokaty ny anaran'ilay mpianatra. Ny anaran'ilay mpianatra tena mila kiraro vaovao izany. Rehefa nirava ny mpianatra, nosokafan'ilay mpampianatra ilay sombin-taratasy ary hitany fa anarana mpianatra iray ihany no nosoratan'ny mpianatra rehetra.
2. Raha toa ka Iraniàna i Michael Jackson
Ary raha toa ka teraka tany Iràna i Michael Jackson? Toa inona ny fisehon'ny hirany malaza “Thriller”? Ahoana no nety fitrangan'ny dihy malaza amin'ny mozikan'ny lahatsary misy lohahevitry ny horohoro? Manome topimaso maneso ny rakikira anaty lahatsary YouTube etsy ambony.
3. Rehefa manana lantom-peo Persiàna ny takelaka famantarana stop
Estop, nozarain'ny Pejy Facebook-n'ny Beyond the Shahs of Sunset
Sarotra ilay fiteny. Tsy ho takatro mihitsy ny teny Persiàna ho an'ny sahona — قورباغه — hivoaka araka ny tokony ho izy avy amin'ny vavako. Ho an'ny teratany Persiàna, tsy mitsahatra ny mampihomehy ny haratsin'ny fanononako. Maro amin'izy ireo no sahirana amin'ny fanononana ny teny izay miantomboka amin'ny S. Eh no lazain'izy ireo alohan'ny S.
Na dia an'ny mpiasa amin'ny fanorenana any Etazonia aza ny sary etsy ambony (ny fiarovan-doha miaraka amin'ny “Kiewit”, orinasa iray momba ny fanorenana miorina ao Nebraska, manome izany), mitoetra ihany ny vazivazy.
4. Tsy hifarana mihitsy ve ny Nowruz (Taom-baovao Iraniana)?
“Loharanon-kerinay lehibe indrindra ny fahasamihafàna, hatrizay ary ho an'ny ho avy rehetra.”
Maharitra tapa-bolana ny fialantsasatry ny Nowruz. Ankalazaina amin'ny alalan'ny fiaraha-misakafo an-kalamanjàna ny andro farany, araka ny fomba mahazatra. Ny andro farany amin'ny fialantsasatra Nowruz (1 Aprily), nanomana fety tao amin'ny White House i Michelle Obama, vadin'ny filoha Amerikana Barack Obama. Nanoratra tao amin'ny Facebook ny mpandray anjara iray, Azadeh Pourzand:
Ao amin'ny White House i Azadeh Pourzand ho fankalazana ny Nowruz.
Voninahitra tanteraka ho ahy ny nanatrika ny fankalazana ny Norooz androany tao amin'ny White House. Fa teo no nahatsapako fa misy fitiavana sy fahamendrehana hafahafa amin'ny fifindramonina noterena, very trano, namana sy olona ao amin'ny fianakaviana izay tena tianao, ary manao trano kely vaovao marefo manomboka amin'ny tsy misy. Ireharehako ny maha Iraniàna ahy. Ireharehako ny maha Amerikàna ahy. Ary indrindra indrindra, afaka mirehareha aho manana zanaka mpitsoa-ponenana indray mandeha, ary any aoriana lasa mpifindra monina.
5. Rehefa tsy voatery ny hijab
Fianakaviana Iraniàna mizara sary miaraka amin'ny fanentanan'ny My Stealthy Freedom.
Ny hetsika anaty tranonkalam-pifandraisana My Stealthy Freedom, izay ahitana vehivavy Iraniàna manala ny saron-dohany imasom-bahoaka ao Iràna ho fanoherana ny lalànan'ny hijab tsy maintsy arahana ao amin'ny firenena, vao tsy ela akory izay, no tao amin'ny vaovao indray. Vao haingana, nitaky ny zo handà ny sidina mankany Iràna ny ekipa mpiondrana vehivavy ao amin'ny Air France noho ny lalàna manavakavaka (jereo ny lahatsoratry ny GV: Mifandona amin'ny Vehivavin'ny Air France Ny Lalànan'ny Saron-doha any Iran). Nambaran'ilay ekipa mpiondrana ny antony tao amin'ny Pejy Facebook-n'ny My Stealthy Freedom. Noho izany, nandefa fanentanana mandrisika ny vehivavy hafa firenena mitsidika an'i Iràna mba haka sary ny tenany tsy misy saron-doha ilay vondrona. Tao amin'ny mediam-bahoaka, niampanga ny “fitsabahan'ny vahiny” ny sasany. Ny hafa kosa mahita fa tsara ilay fanohanana avy amin'ny vehivavy vahiny.
Nizara ny sary etsy ambony ny fianakaviana Iraniàna iray miaraka amin'ny fanentanana My Stealthy Freedom. Izany dia ho valin'ny sary teo aloha izay an'ny ray sy ny zanany vavy ihany, izay nanazavan'ilay raim-pianakaviana ao amin'ny naoty fanazavana fa hevitra manokan'ny zanany vavy izany mba hiakanjony araka izay itiavany azy:
Eto amin'ity sary ity, afaka misafidy malalaka ny fomba fiakanjony ihany koa ny vadiko, toy ny zanako vavy. Manao zavatra amin'ny fandraisana fepetra arak'izay heritreretany azy ny vadiko. Ny fahalalampomba anatiny no tena zava-dehibe, ho ahy sy ny fianakaviako. Ny olombelona aloha, ary avy eo ny lalàna tsy anavahana no zava-dehibe. Tsy mitady na mandrisika ny fiarahamiaina manahirana izahay. Mino izahay fa ny fahalalampomba dia tsy miankina amin'ny hoe eny na tsy manao hijab ny vehivavy.
Olona iray maneho hevitra tamin'ny sary teo aloha manontany raha toa ka mbola tsy tany amin'ny ady mihitsy ilay raim-pianakaviana. Namaly ilay raim-pianakaviana:
Tsy mihevitra afa-tsy ny Silamo tsara toetra tena mpivavaka sy tena manaraka fivavahana ny olona izay mitompo teny fantatra sady tery saina. Fa ny olona toa ahy dia nandeha tany an'ady noho ny fitiavana an'i Iràna ihany, ary tsy mba nahazo tombontsoa mihitsy tamin'izany toe-javatra izany. Ary ankehitriny miady amin'ireo izay te-hisintona an'i Iràna ho any amin'ny fihemorana aho. Amin'ny fanantenana ho an'ny andro izay hahatonga anay rehetra ho mpiray tanindrazana tsy miankina amin'ny eritreritray sy ny zavatra inoanay ary afaka mifandefitra bebe kokoa.
6. Rehefa milalao baolina kitra ny robot
Nitatitra momba ny fifaninanana robot tany Tehran ny lahatsarin'ny AJ+, izay nandraisan'ireo masinina anjara tamin'ny baolina kitra, fikarohana-sy-famonjena ary fifaninanana asa an-trano. Vehivavy injeniera no anisan'ny mpifaninana sy “nampiseho ny fahaizany,” zavatra miavaka raha jerena ny zavakanto sy kolontsaina mifikitra amin'ny nentin-drazana any Iràna sy ilay sehatra, izay anjakan'ny lehilahy ny asa famolavolana tetikasa amin'ny ankapobeny, araka ilay tatitra.
Raha mahita ny votoaty mifandray amin'i Iràna ianao ka tianao ny mieritreritra ny Global Voices, bitsiho ho ahy izany amin'ny @ETori.